Izilwanyana zasentlango yaseSahara | Uhambo lweNdaba
UMariela Carril | 10/05/2022 17:00 | Afrika
Intlango yeSahara yenye yezona ntlango zidumileyo emhlabeni, ezineentsuku ezishushu kunye nobusuku obupholileyo. Kubonakala ngathi akukho nto okanye akukho mntu unokuphila kuyo kwaye, nangona kunjalo, iSahara inobomi obuninzi.
Kwiinduli zayo, apho ubani anokucinga ukuba akukho nethontsi lamanzi elixhasa ubomi, eneneni kwenzeka okwahlukileyo: iSahara iphuphuma bubomi! Izilwanyana zayo zezinye zezona ntlobo zindala emhlabeni kwaye zikwazile ukuziqhelanisa neemeko zokuphila ezingelula kwaphela. masibone namhlanje izilwanyana zaseSahara.
1 i-addax antelope
2 inkamela yenkamela
3 UDorkas Ibhadi
5 inyoka enophondo
6 esweni icikilishe
7 umbulali unomadudwane
8 inciniba yasentlango
9 izinja zasendle zaseAfrika
10 ingwenkala yasesaharan
11 fenek impungutye
13 Anubis Mfene
14 i-nubian bustard
15 ihedgehog yasentlango
16 imongoose ebhityileyo
Luhlobo lwe Inyamakazi eneenyawo ezisicaba, imilenze ebavumela ukuba bahambe entlabathini. Kodwa kulihlazo ukuba kunjalo kumngcipheko wokuphela ekubeni bekhangela inyama yabo nolusu lwabo, ukongezelela kwinto yokuba indawo abahlala kuyo iya isiba mandundu ngenxa yokufudumala kwehlabathi nezenzo zabantu.
Namhlanje ezi zilwanyana zincinci kunexesha elidlulileyo kwaye ngenxa yemilenze yazo, kunzima ukuba zibaleke kwizilwanyana zazo zendalo.
Inkamela nentlango zihamba kunye, nenkamela iyahamba inkamela enemingxuma emibini, likhadi leposi lakudala laseSahara. Kulapha kumandundu aso esi silwanyana sigcina amanqatha, hayi amanzi. Inkamela inokusela iilitha ezili-100 zamanzi ngemizuzu nje elishumi!
Ikwasisilwanyana ilula kakhulu, enye yezinto ezinkulu zasekhaya zasentlango, kwaye isetyenziswa kakhulu kuba yomelele kakhulu kwaye inokuhamba iikhilomitha ezininzi ngaphandle kwamanzi okanye ukutya. Oyena mhlobo womntu emhlabeni unjani!
Nguye ezona ntlobo zixhaphakileyo kuzo zonke iibhadi: Imalunga neesentimitha ezingama-65 ubude kwaye inobunzima obumalunga neekhilogram ezingama-50. Elinye igama elifumanayo ngu "Ariel ibhadi". Ezi zizilwanyana ezitya imifuno ezitya amagqabi ematyholweni nasemithini.
Ngaba ukhe wazibona zitsiba xa zibona amarhamncwa azo? Ngabo kwaye, ngokutsho kweengcali, bakwenzela ukubabonisa ukuba bakwimeko entle kwaye baza kubetha umlo wobomi babo. Banesibindi ewe, kodwa nangona kunjalo luhlobo olusengozini kakhulu.
Ingaba lonto yi ibhungane elincinci elimnyama elikhupha kakhulu kwaye oko kutya kuyo yonke into eshiywe zezinye izilwanyana. Zintathu iindidi zibaliwe, le yenzayo iibhola ze poop, lowo wemba imingxuma kwaye lowo wonqenayo kwaye uhlala endle kuphela.
Eli siko le-eschatological, elenza iibhola ze-poop, likhethwa ngamadoda ohlobo. Iimazi zithande ukugrumba imingxuma kwaye zihlala ngaphakathi.
Zikwaziwa njengeenyoka zesanti kunye neetoti zikhule zibe yi-50 yeesentimitha ubude. Kuphela ubabona ebusuku kwaye ngokubanzi emini bazingcwabe entlabathini. Ngaba iinyoka ezinobuhlungu oko kunokubangela umonakalo omkhulu eluswini, ukutshabalalisa iiseli kunye nokuvelisa ubuthi obuninzi.
Inyoka enophondo namhlanje a izilwanyana eziyingozi ikakhulu ngenxa yokuwohloka kokusingqongileyo. Akukho mntu wazi ngokuqinisekileyo ukuba kutheni zineempondo emehlweni abo, nangona kucingelwa ukuba kukukhusela esantini okanye ukuhambahamba kuyo okanye ukufihla...
sisirhubuluzi inetyhefu kakhulu, i-cold-blooded, ngoko ukushisa kwe-ambient kunempembelelo enkulu kwizenzo zabo. Zihlala kwizisele ezishushu kwaye xa kubanda azibonakali ndawo. Yiyo loo nto icilikishe lingenazo izixhobo zokulwa, xa kubanda liyazikhusela lize libe ndlongondlongo.
Atya ntoni amacikilishe? Zitya izilwanyana ezincinci ezifana neempuku, izilwanyana ezanyisayo okanye izinambuzane. Konke banokukufumana.
Yiyo isinambuzane esinetyhefu kwaye basebenzisa izixhobo zabo ngeendlela ezimbini: ngezitshixo zabo ezinde benzakalisa abachasi babo kwaye ngezikhonkwane zabo ezincinci nezibuthathaka, enye ngokukodwa enencam emnyama, yileyo bayitofa ngayo ityhefu.
Le tyhefu ine-neurotoxins kwaye ivelisa iintlungu ezininzi. Abantwana kunye nabantu abadala bachaphazeleka kakhulu ngoko ke banyathele ngononophelo. Eyona nto imbi kukuba kukho abantu abazithengisayo kwaye bazithengise njengezilwanyana zasekhaya.
Intaka engabhabhiyo mfondini. Yiloo ndlela abasoloko becinga ngayo ngaye, kodwa enyanisweni ukungakwazi kwakhe ukubhabha kuyenza ilunge loo nto ngokubakho esinye sezilwanyana ezikhawulezayo ehlabathini. Inciniba inokubaleka iimayile ezingama-40 ngeyure, nangona zinkulu.
Kukho iintlobo ezahlukeneyo zeenciniba kwintlango yeSahara, babeka amaqanda amakhulu kwaye imilenze yayo emide ineenzwane ezimbini, ezilungele ukuhamba imigama emide. Le milenze yomelele kakhulu, inokubetha ukukhaba okukhulu, yaye koku kongezelelwa ukuba banombono omangalisayo nokuviwa okukhethekileyo.
Iinciniba zasentlango azihambi kude nemithombo yamanzi kwaye ukuba uzijonge ngononophelo, lumka, kukho amarhamncwa akufutshane. Batya ntoni? Amatyholo, ingca, ngamanye amaxesha izilwanyana ezincinci.
izinja zasendle zaseAfrika
Zizinja zasendle ezidlamkileyo kwaye ziyazingisa kakhulu xa kufikwa ekuleqeni ixhoba labo, abathi, ekugqibeleni, bakufika kulo, balikhuphe amathumbu. Izinja zihlala kwi-savannahs emazantsi nakwiziko lentlango, kwi imihlambi yodwa
Kulinganiselwa ukuba izinga labo lempumelelo xa beqala ukuzingela lingaphezulu kwama-80%, 90% eSerengeti, xa impumelelo yeengonyama i-30%. Baphumelele kakhulu! Kwaye ukuba oko kwakunganelanga, emva kokubulala ixhoba bayeka izinja ezindala kunye neenjana zityise kuqala.
Ezi zilwanyana Batshabalala, malunga nezilwanyana ezingama-250 ezisele kumbindi nakwintshona yeSahara nakwithafa laseSudan. Ngokuchaseneyo nezinye iingwenkala ezi zincinci zincinci, zinemibala yedyasi embalwa, kwaye zifutshane.
Iingwenkala kwintlango yeSahara zizingela ngcono ebusuku kwaye oko kuyimveliso yobushushu bendawo engqongileyo. Banokuphila ixesha elide kunabazala babo ngaphandle kwamanzi, kuba basela igazi lexhoba labo.
Fanak lithetha impungutye ngesiArabhu ngoko ke igama lale mpungutye incinci. Udyakalashe incinci, enye yeenjana ezincinci kwintsapho eyenziwe yiingcuka, iimpungutye kunye nezinja. Inoboya obukhaphukhaphu kakhulu kwaye bunceda ukubonakalisa ukukhanya kwelanga.
le mpungutye unezintso zasentlango, ngoko ke banciphisa ukulahleka kwamanzi emzimbeni wakho. Yibane imvakalelo enkulu yokujoja kunye nokuva kakuhle kakhulu. Yiyo loo nto belandela ixhoba labo ngokumamela, ngokusisiseko. Basenokukhwela emithini bekhangela iintaka ezincinci namaqanda.
Yimpuku eye yaziqhelanisa kakuhle kakhulu nokuphila kwintlango enzima. Ungatsiba kwaye ubaleke ngesantya esiphezulu, yiyo loo nto iqhubeka iphila kwaye ibaleka kumarhamncwa ayo. Ukutya kwabo kuqulathe izinambuzane, izityalo kunye nembewu, apho baphinda bafumane amanzi.
Luhlobo lwase-Afrika kakhulu olubonwa kwimimandla yeentaba yeSahara. Inombala ongwevu kancinci xa umgama, kodwa kufutshane nayo inemibala emininzi.
Iinkunzi zinkulu kunemazi kwaye ziphila entlango ngokutya kancinci kuyo yonke into, izityalo kunye nezilwanyana ezincinci.
Yi-subspecies yosapho lwe-bustard. Yintaka leyo idla ngokukhethekileyo kwizinambuzane, nangona ukuba ulambile kakhulu ungadla imbewu. Ukulahleka kwendawo yokuhlala kuthetha ukuba kukho amalungu ambalwa nambalwa kolu didi, ngoko ke kunokubonwa njengengozi yokuphela.
Yihedgehog encinci eyenza umlwelwe xa iziva isongelwa kwaye iba rhabaxa, ngoko ke kunzima kakhulu ukuyibamba kuba ihlaba yonke indawo. Oko kuyatya? Izinambuzane, amaqanda kunye nezityalo.
Yimongoose enomsila omnyama. Itya izinambuzane, nangona ikwatya amacikilishe, iimpuku, iintaka kunye neenyoka. Kwakhona inokubulala kwaye itye iinyoka ezinobuhlungu, kodwa kuphela ukuba uziva usongelwa ngokwenene.
Le mongoose inokukhwela imithi ngcono kunemongoose eqhelekileyo, ngoko itya iintaka ezininzi.
Nguye "encumile mfisi". Akukabikho kumngcipheko wokuphela, kodwa kuyinyaniso ukuba inani layo liye lehla ngokuhamba kwexesha kunye nokulahlekelwa kwendalo. Ukuba siyithelekisa nezinye iindidi zeengcuka, amabala ayo avela, nangona xa ingcuka iguga imibala yayo iyatshintsha.
Ingcuka enamachokoza izingela ixhoba layo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Iindaba Zokuhamba » Afrika » Izilwanyana zasentlango eSahara
Izikwere ezinkulu eSpain